यी बारहरुमा कपाल र नङ काट्न हुँदै हुदैन ! आखिर किन ?
हामी नेपालीहरुको समाज अनुसार केहि न केहि रितिरिवाज परम्परा,उखानहरु हुनेनै गर्दछ। जस्तै,कुन बार के गर्नु हुने र नहुने,कुन बार टाढाको यात्रामा निस्किनु हुने र नहुने,कुन बार कपाल,नङ काट्न हुन् र नहुने । यस्तै अन्य थुप्रै कुराहरुको पछाडी केहि न केहि मान्यताहरु रहेको पाइन्छ ।
तपाई हामी मंगलबार, बिहिबार अनि शनिबार कपाल काट्नु हुन्न भनेको त सुन्ने गरेकै छौं। तर, केहिले यस्तो कुरामा माने पनि अधिकांश मानिसले यस्तो कुरालाई वेवास्ता गर्ने गर्दछन । हिन्दु धर्म ग्रन्थका अनुसार हप्ताको केहि दिनमा नङ र कपाल काट्न नहुने कुरा बताइने गरेको छ। धर्म ग्रन्थलाई आधार बनाउने हो भने यो थाहा हुन आउछ कि निषेधित दिनमा कपाल साथै नङ काट्दा नकारात्मक उर्जा मानव शरीरमा प्रवेश गरे सँगै अशुभ उर्जा थपिने विश्वास गरिन्छ।
धर्म ग्रन्थका अनुसार यदि तपाई मंगलबार नङ काट्नु हुन्छ भने तपाईको परिवारमा मन-मुटाब बढ्न सक्छ भने तपाईको शरीरमा रक्त नाली सम्बन्धि समस्या बढेर जान्छ। साथै यस बार कपाल काट्नु भएमा तपाईको धन हानी समेत हुने विश्वास गरिन्छ। तपाईको कुण्डलीमा मंगल ग्रह कम्जोर रहेको छ भने तपाईले यस दिन निषेधित कार्य गर्नु भएमा मंगल ग्रहको कृपा कम हुने साथै अशुभ फल मिल्न शुरु रहने विश्वास रही आएको छ।
बिहीबारको कुरा गर्नु पर्दा यदि तपाई नङ काट्नु हुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा सफलता मिल्न गार्हो हुने ज्योतिस शास्त्र बताउने गर्छ। यस दिन तपाईको शरीरमा ग्रहको किरण तपाईको शरीरमा प्रतिकूल प्रभाव देखाउने गर्छ। तपाईलाई नङ काट्नाले यस दिन पेट सम्बन्धि समस्या समेत बढेर जाने विश्वास गरिन्छ। यस दिन कपाल काट्न समेत अशुभ मानिन्छ। यस दिन तपाईमा गलत उर्जा पैदा हुने हुँदा तपाईको दाम्पत्यजीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
शनिबारको दिन यदि तपाई नङ काट्ने गर्नु हुन्छ भने तपाईको अआयु घटेर जान्छ भन्ने विश्वास रही आएको छ। साथै यसो गर्दा तपाईको धर्म दरिद्रता समेत बढेर जान सक्छ। शनिबार तपाईले कपाल काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईमा गलत विचार हावी रहन सक्ने कुराको ज्योतिष शास्त्र बताउने गर्छ। साथै यस दिन कपाल काट्नाले तपाईमा हड्डी सम्बन्धि समस्या बढेर जाने हुन्छ।
तपाई हामीले अग्रजहरुले मंगलबार, बिहिबार अनि शनिबार कपाल काट्नु हुन्न भनेको त सुन्ने गरेकै छौं। तपाई हामी यस कुरालाई कसैले मान्ने गर्छौं भने कसैले नमान्ने गर्छौं। यस भनाइको पछाडी के रहस्य रहेको छ भन्ने कुरा त कमैलाई थाहा होला। हिन्दु धर्म ग्रन्थका अनुसार हप्ताको केहि दिनमा नङ र कपाल काट्न नहुने कुरा बताइने गरेको छ। धर्म ग्रन्थलाई आधार बनाउने हो भने यो थाहा हुन आउछ कि निषेधित दिनमा कपाल साथै नङ काट्दा नकारात्मक उर्जा मानव शरीरमा प्रवेश गरे सँगै अशुभ उर्जा थपिने विश्वास गरिन्छ।
एक अनौठो दृश्य : एउटा कुकुरको मृत्युमा पूरा गाउँ शोकमग्न, ब्याण्डबाजासहित निकालियो शवयात्रा !